Hoyga - Tirinta Boqortooyada
Qaado Dib u gurasho Virtual ah Fr. Michel Rodrigue
Farriimaha jannada ee xilliyadeenna
Ha quudhsanina erayada nebiyada,
laakiin tijaabi wax kasta;
ku sii hay waxa wanaagsan ...
(1 Tesaloniika 5: 20-21)
Soo dhawow Muuqaalo
Dhimashadii Rasuulkii ugu dambeeyay, Muujintii Dadweynaha ayaa dhammaatay. Dhammaan waxa daruuriga u ah badbaadada waa la muujiyey. Si kastaba ha noqotee, Ilaah ma joojin inuu la hadlo abuurkiisa! The Catechism ee Church Catholic ah odhanaya "xitaa haddii Muujintii horeba u dhan tahay, si buuxda looma qeexin; Waxay u sii ahaataa caqiiddada Masiixiyiinta si tartiib tartiib ah inay u fahmaan muhiimada buuxda ee qarniyadii ”(n. 66). Sheegiddu waa codka weligiis ah ee Eebbe, oo sii wata inuu ka dhex hadlo malaa'igihiisa, kuwaas oo Axdiga Cusubi ugu yeedhay "nebiyo" (1 Korintos 12:28). Miyey jiraan wax Eebbe idhaahdaa mihiim? Uma maleyneynno sidoo kale, waana sababta aan u abuurnay degelkan: meel u ah jidhka Masiixa inuu ku kala garto codadka lagu kalsoonaan karo ee wax sii sheegidda. Waxaan aaminsanahay inay Kaniisaddu u baahan tahay hadiyadda Ruuxa Quduuska ah abidkeed - iftiin mugdi ah - markaan ku xisaabtano imaatinka Boqortooyada Masiixa.
Afeef | Dadweynaha ka soo horjeedaa Muujinta Khaaska ah | Tarjumaadda
Maxaa u arkaa wax arkahaas?
Muxuu Edson Glauber?
Maxay Tahay Sababta Ruux Aan U Badnayn?
Waa maxay Sababta Kaliforniya?
Sababta Fr. Michel Rodrigue? Dib u gurasho Virtual
Waa maxay sababta Eduardo Ferreira?
Maxaa Marco Ferrari?
Maxaa Alicja Lenczewska?
Maxaa Aabe Stefano Gobbi?
Waa maxay sababta Elizabeth Kindelmann?
Maxaa Gisella Cardia?
Maxay tahay sababta Martin Gavenda?
Waa maxay sababta Addoonkii Eebbe Luisa Piccarreta?
Maxey U Yihiin Kuwa Himilo ee Marwadaheena Medjugorje?
Maxaa Pedro Regis?
Maxaa Simona iyo Angela?
Maxaa Luz de Maria de Bonilla?
Maxaa Valeria Copponi?
Valeria - Waqtiyadan dhamaadka ah
... xitaa waan kuu soo dhowaan doonaa.
Gisella - Xanuunkaygu wuu sii xoogaysanayaa
... cadho Ilaah mar dambe lama joojin karo.
Sida loogu noolaado doonista Rabbaaniga ah
Haddiyad ubadka Ilaahay ku manaystay wakhtiyadan...
Eeg dhammaan farriimaha »
Fiidiyowyadii ugu dambeeyay
Caawinta xiriirka ee aan dhammaanteen u baahanahay! Qaybta 2 ee Christine Bacon, "dhakhtarka xiriirka."
Waa in la Ogyahay Talada Xiriirka Kaas oo Shaqeyn Kara Mucjisooyin - Qeybta 1. Baro sida Xurmada loola jeedo.
Waxyaabaha qarsoon ee qarsoon (la wadaag dhallinta!): QARANKA 54 DAY ROSARY NOVENA oo leh Fr. Blount iyo Christian
Eeg dhamaan fiidiyeyaasha »
Digniinta, Iscelinta, iyo Mucjisada
Waqtiga dib udajinta
Boqortooyada ka geeska ah
Saddexda maalmood ee mugdiga
Soo Laabashada Saamaynta Shaydaanka
Dhawr khiyaanooyin ah ayaa ka hadlay wakhti cidhiidhi weyn oo soo socda dhulka dushiisa. Qaar badan baa is barbar dhigay duufaan sida duufaanka.
Akhri Jadwalka buuxa
Waxaa jiray dhacdooyin waaweyn "kahor" iyo "kadib" taariikhda kitaabiga ah oo badalay habka nolosha aadanaha ee Dunida. Maanta, isbeddel kale oo muhiim ah ayaa nagu soo food leh mustaqbalka dhow, dadka intiisa badanna waxba kama oga.
Fahamka albaabka naxariista iyo albaabka cadaaladda inta lagu gudajiro duufaanka ...
Maalinta Rabbigu ma aha afar iyo labaatan saacadood, laakiin sida ku xusan aabayaasha kiniisadda,
Waqtiga dhulku nadiif noqon doono oo ay quduusiinta la talin doonaan Masiixa.
Akhri jadwalka oo buuxa
Kaniisadda waa la yareynayaa dhinacyadeeda, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in mar kale la bilaabo ...
Iyada oo Digniinta iyo Mucjisadu ay hadda ka dambeyso bini-aadamka, kuwa diiday in ay ka gudbaan "albaabka naxariis" waa in ay hadda ka gudbaan "albaabka caddaaladda."
Dhaqanka xurmada leh wuxuu xaqiijinayaa in, dhamaadka qarniga, nin St. Paul ugu yeeraya "kii sharciga falaa" la rajeynayo inuu u kaco sidii Masiixa beenta ah ee adduunka, isagoo isu dhigaya mid cibaadada ...
Waa inaanu si cad u sheegno: ruux ahaan iyo akhlaaq ahaan, adduunka wuxuu ku jiraa xaalad ka xun sidii ay waligeed horay u soo martay taariikhda.
Adduunkan wuxuu si dhakhso leh u arki doonaa waagii dahabiga ee ugu sharafta badnaa abid ee uu arko ilaa Jannada lafteeda. Waa imaatinka Boqortooyada Ilaah, kaas oo doonistiisa lagu dhammayn doono dhulka Jannada.
Kaniisaddu waxay baraysaa in Ciise, runtii, uu ku soo laaban doono sharaf iyo in adduunkan, sidaan ognahay, uu ku imaan doono hakad. Hase yeeshe tani ma dhici doonto kahor dagaal kulul, oo cadaawe ah oo cadowgu sameyn doono dalabkiisii ​​ugu dambeeyay ee xukunka adduunka ...
Mararka qaar 'Imaatinka Labaad' wuxuu tixraac u yahay dhacdooyinka dhow ee ka soocaya Masiixa jir ahaaneed, muuqda, iyo soo gelitaanka jirka ee dhamaadka waqtiga - Digniinta, bilowga Ciidda, iwm - iyo waqtiyada kale 'Labaad. Imaatinka 'waa tixraac Xukunka Ugu Dambeeya iyo Aakhiro weligeed ah oo laga soo saaray imaatinkiisa jidheed dhammaadka wakhtiga.
Caafimaadka, bogsashada, iyo difaaca jirka iyo guriga.
Akhri qoraallada »
Ficillada ruuxiga ah iyo ilaalinta naftaada iyo kuwa aad jeceshahay.
Haddii ay dhacdo in Big Tech uu na xiro, oo aad jeclaan lahayd inaad ku xirnaato, fadlan sidoo kale ku dar cinwaankaaga, oo aan waligiis la wadaagi doonin.
MTS, LCSW, aflagaadada katooliga, qoraa ugu iibinta badan, maamulaha iyo aasaasaha Boqorada Nabadda ee Nabadda.
Akhri bio buuxa »
Qoraa katoolik, blogger, af-hayeen, iyo gabayaa / gabayaare.
Shuruudaha iyo Xaaladaha iyo Nidaamka Asturnaanta
Naqshadeynta websaydhka tiDesign © 2021
Diidmada baahsan ee qayb badan oo kaatoolikool Katoolis ah in ay galaan baadhitaan qoto dheer oo ku saabsan walxaha iscasilaada ah ee nolosha casriga ahi waa, waxaan aaminsanahay, inay tahay qayb ka mid ah dhibaatada aadka u weyn oo ay rabaan inay ka fogaadaan. Haddii fekerka apocalypt-ka loo daayo kuwa loo gacan geliyey ama ku dhacay hanjabaadda argagaxisada xagjirka ah, ka dib bulshada Masiixiyiinta ah, runtii bulshada oo dhan, ayaa si ba'an u liita. Taasina waa lagu qiyaasi karaa marka loo eego nafta bini aadamka lumay. -Author, Michael D. O'Brien, Ma waxaan ku nool nahay waqtiyo aakhiro?
Waxaan si naxariis leh u codsanaynaa in, markaan akhrinayo waxyaabaha ku jira degelkan, dhammaan akhristayaasha ay maskaxda ku hayaan lixda qodob ee soo socda:
1. Annagu ma nihin kuwa ugu dambeeya ee waxa ka dhigaya waxyi dhab ah — kaniisaduna waa - oo waxaan had iyo jeer u gudbin doonnaa wixii ay go'aamiso. Waa la Kaniisadda, markaa, inaan “tijaabinno” wax sii sheegidda: “Waxaa hogaaminaya Magisterium of the Church, the dareeraha fidelium yaqaan sida loo garto oo loogu soo dhaweeyo muujintaas wax kasta oo ka dhigan wicitaan dhab ah oo Masiixa ama quduusiintiisa Kaniisadda. ” (Kaatekiiska ee Kaniisadda Katooliga, n 67)
2. Waxaan labaduba ogsoon nahay oo si qoto dheer u xushmeyneynaa farqiga u dhexeeya muujinta Dadweynaha iyo gaar ahaaneed, oo sinaba uma soo jeedinayno halkaan dambe inaynu ka dalbanayno isla oggolaanshaha kuwii hore ee aaminka ah.
3. Waxaan weli u furan nahay inaan tixgelinno horumarro dheeraad ah oo khuseeya garashada muujinta aan ku darnay, sidaas darteedna kuma sheeganeyno xaqiijin buuxda muujinta kasta ee goobtan, in kasta oo aan go'aansannay in mid walba uu mudan yahay in lagu soo daro halkan ayna muhiim tahay in la faafiyo. Baaxadda waxa ku jira boggan ayaa ah mid si kooban u xaddidan waxna waa inaan laga soo qaadin maqnaanshaha kaliya ee boggeeda.
4. In kasta oo aan si dhab ah u qaadno waxyi kasta oo qaas u ah si dhab ah, haddii ay u muuqato mid lagu kalsoonaan karo xagga wanaagga kaniisadda ee-kaniisaddu-ku xaddiday ee waxgarashada (inbadan ka akhriso riix halkan.
5. Waxaan u aragnaa in xitaa muujinta gaarka ah ee lagu kalsoonaan karo ay tahay in loola dhaqmo sida waafaqsan waxbaridda Kaniisadda. Halkan, waxaan ku qaadanaynaa xikmadda St. Hannibal: “Iyadoo la waafajinayo miyir -qabka iyo saxnaanta muqaddaska ah, dadku ma la tacaali karaan muujinta gaarka ah sida haddii ay ahaayeen buugaag qaanuuni ah ama amarrada Quduuska Quduuska ah…” (warqad ku socota Fr. Peter Bergamaschi)
6. Wax -arkayaashu waa aalad qalad ah, oo sidaas oo kale ah, “… Taariikhda waxyiga nebiyadu ma aha wax aan caadi ahayn in nebigu dabeecaddiisa bani’aadam ee xaddidan oo aan dhammaystirnayn ay saamayn ku yeelato dhacdo nafsi ah, anshax ama ruuxi ah oo caqabad ku noqon karta iftiiminta ruuxiga ah ee waxyiga Eebbe inay si fiican uga dhex ifiso nafta nebiga, halkaas oo nebigu u arko muujinta si aan ku talagal ahayn ayaa loo beddelaa. ” (Newsletter, Hawl wadeenada Saddex-geesoodka, Janaayo-Meey 2014). Sidaa darteed, degelkani ma aha mid taageeraya wax kasta oo argiyuhu arko ama qoro. Waxaan tixgelinaynaa oo keliya waxa la dhejiyay halkan ku saleysan shuruudaha kor ku xusan.
Da 'kasta oo Kaniisaddu ay ku kacdo kufsiga ee wax sii sheegidda, oo ay tahay in la baaro laakiin ma aha in lagu caayo. - Qiimeynta Kaarka Cardinal (BENEDICT XVI), Fariinta Faadumo, Tafsiirka diinta, www.vacan.va
Waxaan kaa codsaneynaa inaad ku dhageysato si fudud oo qalbi iyo daacadnimo maskax leh digniinta salaanta ee Hooyada Ilaah P Roman Pontiffs… Haddii la aasaasay ilaaliyeyaasha iyo tarjumayaasha Muujinta Rabbaaniga ah, oo ku jira Qorniinka Quduuska ah iyo Dhaqanka, iyaguna way qaataan Iyaga oo ah waajibaadkooda ah inay kula taliyaan dareenka kuwa aaminka ah - markay, baaritaanka mas'uuliyadda ka dib, ay ugu xukumaan danta guud - nalalka ka sarraysa ee ay ku farxday Ilaah inuu si xor ah ugu deeqo nafaha qaaska ah ee mudnaanta leh, ee aan u soo jeedin caqiidooyin cusub, laakiin nagu hanuuni habdhaqankeena. —SAINT POPE JOHN XXIII, Farriinta Papal Radio, Febraayo 18-keedii, 1959; L'Osservatore Romano
Kuwa loo waxyooday, yaa wax ka og xagga Eebbe ka yimid isagoo u sugnaaday heshiis adag. Jawaabtu waa mid la hubo… Qofka loo soosaaray muujinta qaaska ah oo loo muujiyo, waa inuu rumaysto oo adeecaa amarka ama farriinta Eebbe, haddii loo soo bandhigo caddayn ku filan… waayo, Ilaah baa la hadla isaga, ugu yaraan mid kale, oo sidaas darteed u baahan isaga inuu rumeeyo; sidaas awgeed, wuxuu ku xidhan yahay inuu rumaysto Ilaaha, kaas oo isaga uga baahan inuu sidaas sameeyo. —POPE Benedetts XIV, Halyeeyga Virtue, Vol III, p.390
Kuwa ku dhacay dunidan adduunku waxay ka eegaan meel kore iyo meel fog, way diidaan waxsii sheegashada walaalahooda… - Pope FRANCE, Evangelii Gaudium, n 97
Dadweynaha ka soo horjeedaa Muujinta Khaaska ah
Xisaabinta Boqortooyada waa degel, u hoggaansamaysa go'aammada ugu dambeeya ee Kaniisadda, oo soo saareysa waxa loogu yeero "muujinta gaar ahaaneed" - fariimaha saadaasha ah ee jannada laga soo diray si ay nooga caawiyaan inaan si buuxda ugu noolaano muujinta rabbaaniga ah ee saacadda aan ku bixinayno Dunida. Soo dejinta "Gaarka ah" badiyaa waxaa loola jeedaa Ilaah si loo faafiyo oo loo aqbalo. Si kale haddii loo dhigo, si dhib yar looma jeedin inay ahaato “mid gaar ah.” Iyada oo loo marayo muujinta "gaar ahaaneed", waxaan ku haynaa Rosary-ka ay Marwadayadu siiso St. Dominic; cibaadada Sabtida Koowaad iyo digniinta Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee ka socota Marwadeena Faadumo. Waxaan haynaa digniinta macluusha iyada oo loo marayo Marwadayada La Salette, haddii dadku sii wadaan gafka Ilaah, iyo sidoo kale rabitaanka Masiixa ee Axdiga Raxmaanka Axadda iyo Ilaahnimada naxariista leh iyada oo loo marayo muujintiisa St. Faustian Kowalska-in la xuso oo keliya dhowr. Inaan iska indhatirno waxyiga oo dhan iyada oo aan wax tixgelin ah la siinin waxay na gelinaysaa khatar weyn oo ah inaan iska indhatirno Rabbi laftiisa.
Ereyga “asturan” ayaa loo aaneeyey soo dejin caynkaas oo kale ah oo samada ka timid si looga horkeeno muujinta dadweynaha Depositum Fidei (Deposit of Faith): Qorniinka iyo Dhaqanka si hufan loogu tarjumay weligiisba magisterium. Muujintaan dadwaynaha, waxaan leenahay aasaas sugan - gogol adag oo aan marwalba si nabadgelyo ah ugu dul istaagi karno, waxkastoo yimaadaba, iyo ilaalin aan lagaranayn oo naga ilaalinaysa buuraha halista ah. Waxyaalaha ku saabsan muujinta dadweynaha, keligood, guud ahaan waxay dalbanayaan oggolaanshaha iimaanka rabbaaniga ah (oo ah dabeecad ka sarraysa) dhammaan nafaha, oo aan waxyi gaar ah waligiisna ku dari karin waxyaabaha uu ka kooban yahay. Runtii, wax kasta oo ku dhex jira muujintaan dadweynaha waa gabi ahaanba hubaal ah; wax alla wixii ka soo horjeedaa waa gabi ahaanba been ah, mana jiri doonto waxyi dadweyne oo cusub ilaa dhamaadka waqtiga.
Weligaa taas ha iloobin.
Laakiin ha iska dhigin in hadda lagu dhammeeyey! Kaatekiiska Kaniisadda Katooliga wuxuu leeyahay:
Maaha doorka [waxa loogu yeero 'muujinta' gaarka ah '] in la wanaajiyo ama la dhammaystiro muujinta Masiixa ee saxda ah, laakiin in laga caawiyo in si buuxda loogu noolaado iyada oo la joogo xilli cayiman oo taariikhda ah. Waxaa hagaya magisterium kaniisadda, fidintaum ee tirakoobka garanayaa sida loo garto loona soo dhoweeyo muujintaas wax kasta oo ka dhigan wicitaan dhab ah oo Masiixa ama quduusiintiisa kaniisadda. . . ” (§ 67)
Kaatekiiska sidoo kale wuxuu leeyahay:
Waxkasta oo uu sheego iyo waxa uu sameeyo, bina’aadamka waxaa ku waajib ah inuu si daacad ah u raaco waxa uu ogyahay inuu yahay mid xaq ah oo sax ah. (§1778)
Katekismka Kaniisadda Katooliga ahi way qabataa ma waxaad dhahdaa: "Aadanaha waxaa waajib ku ah kaliya inuu si daacad ah u raaco runtaas gaarka ah ee runta ah ee si rasmi ah loo soo bandhigo iyadoo la soo bandhigayo aaminaadda dadweynaha." Laakiin qallooca khiyaanada leh ee ku saabsan waxbarista kaniisada ayaa ah, masiibo, dhab ahaan waxa qofku mararka qaar ka maqlo goobo badan oo katoolik ah maanta markasta oo fariimaha degdega ah ee Jannada la wadaago: “Oh, taasi waa waxyi gaar ah? Pshh! Waan ka jawaabi doonaa si kastaba ha noqotee waxaan dareemayaa inaan u jawaabayo, markaa; aad baan kuugu mahadnaqayaa oo maalin wanaagsan ayaan kuu ahay! ”
Arimahan qalloocinta ah ee ku dhowaad dhammaan macnahiisu waa waajibaadkeenna sharafta leh ee carruurta Ilaah in aan raacno damiirkayaga oo aan dhegaysanno codka Ruuxa had iyo jeer, oo ay kujirto tilmaamaha socda, barakada, digniinta, iyo waano qaadashada jannada. Tan iyo goorma ayay xoogaa run ah ahayn inay ahaato qayb si cad oo muuqata oo ka mid ah dhigaalka iimaanka si aan madmadow u madhnayn? Tan iyo goorma ayaa kani ka ilaaliyaa katoolik kan waxkastoo suuro gal ah oo ah inuu leeyahay waajib - xitaa mid daran oo deg deg ah — inuu ka jawaabo?
Haddii aynaan geesinimo iyo geesinimo hore ugu socon doonin waxa maskaxdeenna iyo qalbiyadeenna ay ku xukumeen inuu run yahay iyada oo loo marayo riyadayda Jannada, markaa innagu ma nihin dad bini-aadam oo sax ah; xaqiiqdii ma noqon karno Katoolik sax ah hadaanan nahay bini aadam sax ah. Erey ahaan, muujinta dadweynaha maahan martiqaad lagu yareynayo bini-aadamkeena ku kobcaya iyo xorriyadda; waa dhiirrigeliye dhiirrigeliya labadaba.
Marka, asxaabta qaaliga ah, kalsooni ku taagtaan aasaaskan aan la loodin karin ee aan ku leenahay muujinta dadweynaha: ku jira Qorniinka, ku koraya Dhaqanka Suubban, oo si hufan loogu tarjumay magisterium. Marnaba geesinimo, fikir, hadal ama camal - guddi ama dhaafid-ku burin maayo aasaasayaashan (xitaa haddii aad u malaynayso in wax-sheegid khaas ah oo la sheegayo inay kaa codsanayso inaad sidaas sameyso). Laakiin ha u oggolaan in aasaaska kaa hor istaago inaad fuulto weli.
Markuu jannada hadlayo, waa muhiim. Oo jannada ayaa na soo wacaya maanta sida aan waligeed horay u dhicin taariikhda. Waxbaa soo socda. Wax aan waligood horay loo arag taariikhda. Wax taariikh ah lafteeda ayaa u baahan sidii taajkeeda. Jannada ayaa kula hadlaysa.
Macluumaad dheeri ah, oo ku saabsan muujinta bulshada iyo tan gaarka ah, ka eeg bogga 48-69 ee Taajka Quduusnimada iyo p. 93-95 ee Boqortooyada Taariikhda waxaa qoray Daniel O'Connor.
Sidoo kale arag waxa soo socda ee Mark Mallett, qoraaga of Ereyga Hada:
Waxsii sheegista si sax ah loo fahmay
Ma iska indho tiri kartaa Waxyiga gaarka ah?
Maxuu Dunida Ugu Sii Joogaa Xanuun
On Muujinta Gaarka ah
Ee ah kuwa Arka iyo Kuwa Arka
Haddii aad akhrineyso bog tarjuman oo websaydhkan oo Ingiriis ah asalka ah, fadlan maskaxda ku hay inay u badan tahay inay jiraan qaladaad xagga tarjumaadda ah.